Ahoana ny SEO ny tranonkalan'ny orinasa?
Azoko antoka kokoa fa saika ny tompon'ny tranokala rehetra dia manana fanontaniana hoe "Inona no teknikam-pahefana ilainao hampiasana ny tranokalanao mba hampisehoana ny pejy voalohan'ny fikarohana?" Ny valiny amin'ity fanontaniana ity dia mahitsy. Ny fomba tsara indrindra hanatsarana ny toerana misy anao dia ny fametrahana teknika fanadiovana fikarohana. Na dia tsotra aza ny fanazavana dia toa sarotra kokoa ny dingana. Ny fitaovam-pikarohana dia manana algorithmes hananganana vohikala - نقل الاثاث بالخرج . Izany no antony raha tsy manaraka ny algorithm anao ianao dia miala amin'ny lalao fotsiny. Avy amin'ny hevi-dehibe izay mikaroka ny fitaovana ampiasaina rehefa mampiasa ny tranokala ny tranonkala dia ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokala, ny mpampiasa ny fotoana dia mandany amin'ny tranokala iray, ny isa navoakany, matetika ny fanavaozana ny vaovao ao amin'ny tranokalanao, ny maha-zava-dehibe izany fampahalalana amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa sy ny fomba manamarina ny tranokalanao. Noho izany, afaka mahita ianao fa ny paikady fanatsarana ny fikarohana dia fandaniam-potoana sy dingana mbola mitaky fomba maro sy fomba fiasa maro. Na izany aza, fomba tsotra tsotra dia afaka manampy anao amin'ny SEO ny tranonkalan'ny orinasa ao anatin'ny fotoana fohy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tetikady SEO tsotra ianareo izay afaka mampihatra mba hanatsara ny tranokalan'ny orinasa.
Titel tags optimization
A titre Ny tag dia iray amin'ireo singa fanatsarana manan-danja indrindra izay mamely mivantana ny tranonkala iray. Ny fitaovan'ny fikarohana dia mampiasa ny lohateny ho toy ny fametrahana ny votoatin-tranonkalan'ny tranonkala ary voalohany indrindra amin'ny tranonkala parse izay manana marika fanamarinam-peo. Ankoatra izany, ny labels title dia natao ho an'ny fijerena ny tranokalan'ny mpampiasa iray. Ny marika famantarana ny lohateny dia manapa-kevitra raha hanaraka rohy amin'ny tranokala na tsia. Izany no antony ilainao mba hahazoana antoka fa manana mari-pamantarana marika mampifandray tanteraka ny tranonkalanao ianao. Ankoatra izany, mila ampidirinao ny teny sy ny votoatiny mifanaraka amin'izany ianao ao amin'ny lohateninao.
Metadata no fampahalalana momba ny votoatin'ny tranonkala izay miseho amin'ny endrika fohy ao amin'ny lisitry ny tranokala. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia sarin'ny tranonkalanao izany. Ny metadata dia misy lafiny roa manan-danja. Ny voalohany dia lohatenin'ny lohateny izay noresahiko talohan'izay. Ny faharoa dia famaritana meta izay misy antsipiriany bebe kokoa noho ny lohateny ary manome fampahalalana bebe kokoa momba ny votoatin'ny tranonkala. Izy io dia mametraka ny lohatenin'ny Meta ao amin'ny pejy valiny. Ankoatra ny lohateny, ny meta dia manintona ny fanapahan-kevitry ny mpisera hanaraka sehatra iray manokana. Raha tsy mamorona ny famaritana meta ianao amin'ny tenanao, ny milina fikarohana dia handrava ny iray amin'ny fehezanteny voalohany avy amin'ny votoatin'ny tranonkalanao mba hampisehoana izany amin'ny lisitra. Amin'ny ankapobeny, tsy fampahalalana marina izay tsy manan-danja amin'ny mpampiasa izany. Izany no antony tsy tokony hiantehitra amin'i Google amin'ity tranga ity ary mamorona metafomanga amin'ny metanao ianao. Tsara ny manamarika fa mila mamorona famaritana meta ho an'ny pejy tsirairay amin'ny tranonkalanao ianao. Ankoatra izany, mila ampidirinao ao anaty famaritana meta anao ny teny fanalahidy manan-danja mba ahafahan'ny botsikao mitady finday mora hita ao amin'ny dobo misy anao.